Maxkamada dagmada Gaalkacyo oo xukuntay saddax ruux . – STAR FM SOMALIA
Maxkamada dagmada Gaalkacyo oo xukuntay saddax ruux .
Maxkamada dagmada Gaalkacyo ee Puntland ayaa xukun isugu jira ganaax lacageed iyo xabsi ku riday saddax ruux oo ku eedeeysnaa ka ganacsiga qamriga kuwaas oo ay ciidamada amniga Puntland kasoo qabteen Dagmada Jarriiban ee gobalka Mudug.
Xeer ilaaliyaha gobalka Mudug ee Puntland Cabdifitaax Maxamed Aadan ayaa maxkamada ka hor akhriyay eedeeymaha loo heysto sadaxda dhalinyaradaa ee maxkamda la horkeenay iyagona maxkamada horteeda ka hadlay ayaa qirtay in ay galeen danbiga lagu soo eedeeyay kuwaa oo codsaday in xukunkooda loo khafiifiyo.
Dhanka kale maxkamada dagmada Gaalkacyo ayaa la horkeenay saddax eedeeysane kuwaas oo ay xeer ilaalintu kusoo eedeeysay in fal kufsi ah ay ka geysteen deegaanka Bacaadweyn ee dagmada Galkacyo ee Puntland iyadoona xeer ilaaliyaha maxkamada gobalka Mudug Cabdifitaax Maxamed Aadan uu soo oogay kiiska loo heysto.
Guddoomiyaha maxakamada darajada koowaad ee dagmada Gaalkacyo cabdi naasir maxamed cali uu ku dhawaaqay xukunka iyadoona lagu xukumay dil toogasho ah.
madaxweenaha dowlada soomalia oo Waraaqaha Aqoonsiga ka guddoomay laba Safiir
dowlaadaha Soomaaliya iyo Masar oo ka wada hadlay Arrimo muhiim ah